Ahoana ny fomba hahitana asa any Pune? - ALinks
Jolay 16, 2021 Antika Kumari India, asa
Pune dia iray amin'ireo ivon-toerana IT lehibe indrindra any India, miaraka amina orinasa lozisialy IT marobe. Betsaka ny fanantenana ho an'ireo fresera IT ao Pune. Vokatr'izany, kandidà maro avy amin'ny lafivalon'i India no mirohotra mankany Pune mitady asa. Manodidina ny 20,000 40,000 ka hatramin'ny XNUMX ny fresera tonga any Pune isan-taona aorian'ny nahazoany diplaoma ary nitady asa.
Tsotra ve ny mahita asa any Pune?
Manodidina ny 20,000 40,000 ka hatramin'ny XNUMX ny fresera tonga any Pune isan-taona aorian'ny nahazoany diplaoma ary nitady asa. Ary, raha manana ny fahaiza-manao marina ianao ary manao ezaka, dia tsy sarotra loatra ny mahazo asa any Pune. Raha te hiasa amin'ny orinasa IT ianao dia mila manatsara ny fahaizanao aloha.
Asa iza any Pune no tsara indrindra?
Machine Learning Expert dia iray amin'ireo asa be karama indrindra any Mumbai. Ny faharanitan-tsaina sy ny fianarana milina dia miteraka fikorontanana sy antony tsara.
Developer ho an'ny blockchain
Mpanolotsaina momba ny fitantanana
Izaho dia mpamorona rindrambaiko feno.
Ny banky fampiasam-bola dia olona miasa amin'ny indostrian'ny serivisy ara-bola.
Fitantanana ny vokatra.
Mpisolovava ho an'ny orinasa.
Ka ahoana no ahitanao asa ary inona no safidinao? Inona no fomba tsara indrindra hahitana asa amin'ny IT?
Ho an'ireo freshers mitady asa any Pune, misy safidy isan-karazany azo idirana, anisan'izany ny:
1. Vavahady asa: Mazava ho azy, ny fisoratana anarana amin'ny vavahady asa isan-karazany toy ny nanoman.com, hamiratra.com, panomax.ru freshersworld.com, ary ny hafa dia iray amin'ireo fomba tsara indrindra hahitana asa. Misorata anarana amin'ireto tabilaon'ny asa rehetra ireto mba hahazoanao fampandrenesana momba ny asa.
2. Media sosialy: Facebook sy LinkedIn dia toerana roa mety ahitanao fanavaozana asa matetika. Misy vondrona Facebook marobe izay manome fanavaozana tsy an-kijanona eny ivelan'ny campus sy fanavaozana asa ataon'ny MNC amin'ny vondrona isan-karazany. Tokony hitady vondrona asa tsara kokoa ianao amin'ny Facebook na LinkedIn ary mangataka toerana mety sy mahaliana anao.
4. Vondrona WhatsApp: Misy karazana vondrona WhatsApp, ary koa vondrona fanavaozana asa, izay afaka manampy anao hahazo vaovao farany amin'ny fahabangan-toerana ho an'ny freshers. Mitadiava na manatevin-daharana ireo vondrona WhatsApp ho an'ny fanavaozana ny asa IT mba hahalalanao hatrany ny fisokafan'ny asa farany.
Tranonkala tahaka okfreshers.com, freshersvoice.com, ary fahratrade.com manome vaovao farany momba ny asa. Ao amin'ny tranonkalany, apuzz.com, freshersworld.com, jobmela.in, ary chetanasforum.com dia manolotra ny fisokafana asa rehetra ho an'ireo freshers avy amin'ny orinasa isan-karazany, ao anatin'izany ireo orinasa manerantany, izay azonao vangiana sy ampiharina.
Fitaovana mozika ho an'ny vao manomboka India
Oximeter tendron'ny rantsantanana tsara indrindra India
Ahoana ny fomba hahazoana asa any Amsterdam?
Ahoana ny fomba hahitana asa any NYC ho an'ny karana?
Nandeha vola tany India
Toeram-pisakafoanana an-tsakafo any Punjab